အချို့ကအခြေခံ gauge သို့မဟုတ်သက်ရောက်မှုပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသည်။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ ? - Rikoooo
တချို့ကအခြေခံအထွာသို့မဟုတ်သက်ရောက်မှုများပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ ?
ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းတစ်ဦးစာရေး« gauge » folder ကိုသို့ကြပြီသောအခါ, ခြေရင်းဖိုင်တွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပျောက်ဆုံးနေကြောင်းမကြာခဏဖြစ်ပါတယ်။ add-on တစ်ခုလိုအပ်ချက်များကိုဖိုင်တွေ theses လျှင်ထိုကိစ္စတွင်, က panel ကိုထဲသို့အထွာဖော်ပြရန်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ မကြာခဏဆိုသလိုဖြေရှင်းချက် FSX ပြန်လည်အတွက်ပါဝင်ပါသည်။ FSX ပြန်လည်ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်, သင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် gauge Recover« gauge »နှင့်«သက်ရောက်မှု»ဖိုလ်ဒါထဲကနေတိုင်းမူရင်းဖိုင် restore လိမ့်မည်ဟု Rikoooo အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအနည်းငယ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်သော။
Update ကို 13 / 02 / 2014: တစ်ဦးက Prepar3d version ကိုဖန်တီးလျက်ရှိသည်။